Nehemiya 3 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
3 UEliyashibhi+ umbingeleli omkhulu nabazalwana bakhe, ababingeleli, basukuma baza bakha iSango Lezimvu.+ Balingcwalisa+ ngokwabo baza bafaka iingcango zalo; kwaye balingcwalisa ukuya kufikelela kwiNqaba yeMeya,+ nokuya kufikelela kwiNqaba kaHananeli.+ 2 Kwaye ecaleni kwabo kwakusakha amadoda aseYeriko.+ Yaye ecaleni kwabo kusakha uZakure unyana kaImri. 3 ISango Leentlanzi+ lakhiwa ngoonyana bakaHasenaha; balenza ngokwabo ngamaplanga+ baza bafaka iingcango zalo,+ izitshixo zalo nemivalo yalo.+ 4 Ecaleni kwabo uMeremoti+ unyana kaUriya+ unyana kaHakotse wayesenza umsebenzi wokulungisa, yaye ecaleni kwabo uMeshulam+ unyana kaBherekiya unyana kaMeshezabheli wayesenza umsebenzi wokulungisa; ecaleni kwabo uTsadoki unyana kaBhana wayesenza umsebenzi wokulungisa. 5 Yaye ecaleni kwabo amaTekowa+ ayesenza umsebenzi wokulungisa; kodwa iingangamsha+ zawo azizange zifake sandla kwinkonzo yeenkosi zazo. 6 Yaye iSango lesiXeko Esidala+ lalungiswa nguYoyada unyana kaPaseha noMeshulam unyana kaBhesodeya; balenza ngokwabo ngamaplanga baza bafaka iingcango zalo nezitshixo zalo nemivalo yalo.+ 7 Yaye ecaleni kwabo uMelatiya umGibheyon+ noYadon umMeronoti,+ babesenza umsebenzi wokulungisa, amadoda aseGibheyon+ naseMizpa,+ eyayiphantsi kwetrone yerhuluneli+ eyayingaphaya koMlambo.+ 8 Ecaleni kwakhe u-Uziyeli unyana kaHarehaya, umkhandi wegolide,+ wayesenza umsebenzi wokulungisa; yaye ecaleni kwakhe uHananiya ilungu labenzi bezithambiso+ wayesenza umsebenzi wokulungisa; ibe bayilungisa iYerusalem ukuya kufikelela kuDonga Olubanzi.+ 9 Kwaye ecaleni kwabo uRefaya unyana kaHure, inkosana yesiqingatha sesithili saseYerusalem, wayesenza umsebenzi wokulungisa. 10 Ecaleni kwabo uYedaya unyana kaHarumafi wayesenza umsebenzi wokulungisa ngaphambi kwendlu yakhe;+ yaye ecaleni kwakhe uHatushe unyana kaHashabheneya wayesenza umsebenzi wokulungisa. 11 Elinye icandelo elilinganisiweyo lalilungiswa nguMalekiya unyana kaHarim+ noHashubhi unyana kaPahati-mowabhi,+ kwaneNqaba yeZiko Lokosa.+ 12 Yaye ecaleni kwakhe uShalum unyana kaHaloheshe, inkosana+ yesiqingatha sesithili saseYerusalem, wayesenza umsebenzi wokulungisa, yena neentombi zakhe. 13 ISango Lentlambo+ lalilungiswa nguHanuni nabemi baseZanowa;+ balakha ngokwabo baza bafaka iingcango zalo,+ nezitshixo zalo+ nemivalo yalo,+ kwaneekubhite eziliwaka eludongeni ukuya kufikelela kwiSango leeMfumba Zothuthu.+ 14 Kwaye iSango leeMfumba Zothuthu lalungiswa nguMalekiya unyana kaRekabhi, inkosana yesithili saseBhete-hakerem;+ walakha ngokwakhe waza wafaka iingcango zalo, izitshixo zalo nemivalo yalo. 15 Kwaye iSango Lomthombo+ lalungiswa nguShalun unyana kaKolihoze, inkosana yesithili saseMizpa;+ walakha ngokwakhe wabeka uphahla waza wafaka neengcango zalo,+ izitshixo zalo nemivalo yalo, kwanodonga lweChibi+ loMjelo oya eMyezweni+ kaKumkani nokuya kufikelela kwiZinyuko+ ezisuka kwisiXeko sikaDavide.+ 16 Emva kwakhe uNehemiya unyana ka-Azebhuki, inkosana yesiqingatha sesithili saseBhete-tsure,+ wayesenza umsebenzi wokulungisa ukuya kufikelela ngaphambi kweNdawo Yokungcwaba+ kaDavide nokuya kufikelela kwichibi+ elalenziwe nokuya kufikelela kwiNdlu Yabo banaMandla.+ 17 Emva kwakhe abaLevi+ babesenza umsebenzi wokulungisa, uRehum unyana kaBhani;+ ecaleni kwakhe uHashabhiya, inkosana yesiqingatha sesithili saseKeyila,+ wayesenza umsebenzi wokulungisa isithili sakhe. 18 Emva kwakhe abazalwana babo babesenza umsebenzi wokulungisa, uBhavayi unyana kaHenadadi, inkosana yesiqingatha sesithili saseKeyila. 19 UEtsere unyana kaYeshuwa,+ inkosana yaseMizpa,+ ecaleni kwakhe walungisa elinye icandelo elilinganisiweyo malunga nendawo enyukayo ngakwiNdawo Yokugcina Izikrweqe kuDonga Olungaphandle.+ 20 Emva kwakhe uBharuki unyana kaZabhayi+ wayesebenza ngenzondelelo+ yaye walungisa elinye icandelo elilungisiweyo, ukusuka kuDonga Olungaphandle ukuya kufikelela emnyangweni wendlu kaEliyashibhi+ umbingeleli omkhulu. 21 Emva kwakhe uMeremoti unyana kaUriya+ unyana kaHakotse walungisa elinye icandelo elilinganisiweyo, ukusuka emnyangweni wendlu kaEliyashibhi ukuya kufikelela ekupheleni kwendlu kaEliyashibhi. 22 Kwaye emva kwakhe ababingeleli, amadoda eSithili saseYordan,+ ayesenza umsebenzi wokulungisa. 23 Emva kwabo uBhenjamin noHashubhi babesenza umsebenzi wokulungisa ngaphambi kwendlu yabo. Emva kwabo uAzariya unyana kaMahaseya unyana ka-Ananiya wayesenza umsebenzi wokulungisa kufuphi nendlu yakhe. 24 Emva kwakhe uBhinuwi unyana kaHenadadi wayelungisa elinye icandelo elilinganisiweyo, ukusuka kwindlu ka-Azariya ukuya kufikelela kuDonga Olungaphandle+ nokuya kufikelela kwimbombo. 25 [Emva kwakhe] uPalali unyana kaUzayi [wenza umsebenzi wokulungisa] ngaphambi koDonga Olungaphandle nenqaba ephuma ngeNdlu kaKumkani,+ leyo iphezulu yeNtendelezo Yabalindi.+ Emva kwakhe kwakukho uPedaya unyana kaParoshe.+ 26 Kwaye amaNethini+ ayehlala eOfeli;+ enza umsebenzi wokulungisa ukuya kufikelela ngaphambi kweSango Lamanzi+ ngasempuma nangakwinqaba eveleleyo. 27 Emva kwabo amaTekowa+ alungisa elinye icandelo elilinganisiweyo, ukusuka ngaphambi kwenqaba eveleleyo ukuya kufikelela kudonga lweOfeli. 28 Ngentla kweSango Lamahashe+ ababingeleli babesenza umsebenzi wokulungisa, ngamnye ngaphambi kwendlu yakhe. 29 Emva kwabo uTsadoki+ unyana kaImere wenza umsebenzi wokulungisa ngaphambi kwendlu yakhe. Kwaye emva kwakhe uShemaya unyana kaShekaniya, umgcini weSango laseMpuma,+ wenza umsebenzi wokulungisa. 30 Emva kwakhe uHananiya unyana kaShelemiya noHanuni unyana wesithandathu kaTsalafu walungisa elinye icandelo elilinganisiweyo. Emva kwakhe uMeshulam+ unyana kaBherekiya wenza umsebenzi wokulungisa ngaphambi kweholo yakhe.+ 31 Emva kwakhe uMalekiya, ilungu lequmrhu labakhandi begolide,+ wenza umsebenzi wokulungisa ukuya kufikelela kwindlu yamaNethini+ nabarhwebi,+ ngaphambi kweSango Lokuhlolwa nokuya kufikelela kwigumbi eliseluphahleni lembombo. 32 Yaye abakhandi begolide nabarhwebi benza umsebenzi wokulungisa phakathi kwegumbi eliseluphahleni lembombo neSango Lezimvu.+